Sahankii ugu horeeyey ee Degmada Jowhar QORMO XIISO LEH – Gorfeeyaha Wararka Goor Walbo iyo Goob Kasto
Koox beeraleey Talyaaniya ah oo sahamineeysay meel ku wanaagsan beeraha ,ayaa tagay deegaanka maanta loo yaqaan Jowhar oo ahaa dhul miya ah, mana jirin tuulo ama magaalo ku tiil halkaa, waxa cajabiyay hulaanta wabiga, barwaaqada dhulka waxa ay ka qaadeen tijaabo carrada,waxa ay cabireen tebographiyada dhulka, waxa ay go’aansadeen in halkaa ay beera ka tacbadaan.
Jowhar waxaa loo aqoon jiray Villaggio ( Duca degli Abruzzi). Waana magaca ninkii aas-aasay tuuladaa oo ahaa nin beeraleey ahaa oo ka tirsanaa reer Boqorkii talyaaniga ee Savoia- Sir Luigi Amedeo, Duke of the Abruzzi oo markiisii hore yimid somaliya sannadkii 1873dii,waxaa kale oo la sheegaa in uu yimid 1905. waxa uuna guursaday gabar Somali ah, waxa uu ka dardaarmay marka uu dhinto in lagu aaso jowhar,oo qabrigiisu uu ku dhaxyiil xeeyndaabka warshada in kastoo sanadihii dagaalada sokeeye dad loogu sheekeeyay in gaalada lala Aaso faraati dahab ah ay burburiyeen.
Sannadkii 1920kii waxa uu u bedelay degaan dhul beereed ah ,sannadkii 1926dii waxa ay jowhar leheed 16 tuulo oo ay degenaayeen beeraleey u badnaa shaqaalaha ka shaqeeya beeraha shirkada tiradooduna aheed 3000 ruux oo Somali ah iyo 200 talyaani ah.
Isla sannadkaa 1926 dii waxaa la dhisay warshadii sokorta ee ugu weeyneed waqtigaa bariga Afrika, soona saari jirtay 3000 kiintaal,warshadu waxa ay ku shaqeey jirtay gaas dabeeci ah oo laga farsameeyo haraaga qasabka oo loo isticmaalo quwadii warshadu ku shaqeeyneeysay.
Berigaa waxaa magaalada u badnaa qabiilada waaqbiyoow iyo walamooy oo ka tirsan beesha Shiidle oo beeraleey ahaa halka qabiilada kale ay reer guuraa ahaayeen.
Waxana hantida lahaa shirkadda S.A.I.S. “Società Agricola Italo-Somala”, shirkadaa oo Sir Luigi uu aas –aasay 1920kii taa oo dadka deegaanka kula heshiisay in ay ka kireeysato dhul beereed dhan 25.000 Hektar iyo in laga bilaabo bisha janaayo 1921da dadka deegaanka loo dhiso guryo, shaqana la siiyo.
Sanadkii 1923 waxaa la bilaabay mashruucii wabiga lagu leexinayay halkii markiisii hore uu ku qulqulayay wabigana la marsiiyay meel kale ,si biyaha loogu isticmaalo 6 beerood oo markaa warshadu laheed oo ku fadhiyay 5000 Hektar, kuwaa oo lagu beeri jiray Suuf, Qasabka Sokorta, Sisinta, Moos , Kaffee iyo Qudaarta, dhirta aan Somalia laga aqoon ee uu keenay dalka waxaa ka mid ahaa: kapok ( geed dheer oo hindiya laga keenay oo suuf dhalo). Casuarine ( geed ostaraliya laga keenay oo cunta ahaan loo isticmaalo) iyo cocchi ( geed laga sameeyo khamriga ) fiiri: sadaxda sawir ee ugu dambeeysa. Sanadkii 1926 dii Jowhar waxa ay laheed kanaalo beeraha dhaxmara oo celceliskoodu ahaa 760 Km.
Waxaa uu dhisay ,Isbitaal, Farmashiye, Shaleemo, Xero deegaan ah, Busteejo gaadiidka laga raaco, Masjid, Kaneesad, School, Biya xireeno, Tareen ,Xarun umuliso, Xafiis posto, Xarun Telegaraamka, Xarunta Saadaasha iyo la socodka Dabeeysha, Jidad yar yar oo isku xira magaalada iyo warshada, Xargaha Telefonka oo celceliskoodu yahay 35 Km , Hotel 1938, iyo Meela lagu dubo bulakeetiga guryaha lagu dhiso bacdamaa Jowhar ayna laheeyn dhagax wax lagu dhiso.
S.A.I.S. waxa ay gaartay wax soo saarkeedii ugu badanaa sanadkii 1931dii,kaa oo ahaa 401.783 juuni oo Qasab Sokoreed ah. 10.703 juuni oo Suuf ah . 37.830 juuni oo Ganleey ah. 5.928 kartoon oo Moos ah. Waxa la soo saaro waxaa loo dhoofi jiray yurub iyada oo tareenka ka soo qaado Jowhar uu dekeda Xamar keenayay. Villabruzzi Sanadkii 1940, waxaa ku noolaa shacab dhan 12,000, Somali ah iyo 3,000 talyaani ah.
Warshada sokorta SNAI paisa waxaa hostagayay warshada yar yar oo soo saari jiray badeecooyin kala duwan sida Barafoonka, Kabaha iyo qalab kale oo caag ah, Alkoolo ku filan dhamaan isbitaalada dalka, Khamri ah kan loogu jeclaa aduunka oo marka la dhoofiyo halkii qarshaba inta dib loo sii warshadeeyo laga sii sameeyn jiray 7-10 qarsho oo khamri ah.
Jowhar waxaa hoostagay mahadaay oo mar aheed tuulo, waxana ku yiil warshada sameeysa rasaasta ciidamadu u baahan yihiin ee hubka fudud, mahadaay waxaa ku tiil kolleejadii mareeykanka oo markii dambe loo soo raray Jowhar,koleejada oo aheed illaa dugsi sare oo tayo wax barasho oo fiican leh. Ardayda ka dhalatay qooysaska masaakiinta ahna u aheed hooy waxbarasho ,jiif iyo cuntaba. Kollejkaa oo ay wax ku soo barteen arday badan.
Tuuladaa uu dhisay halkaa nin ee ajnabiga ahaa, markii dambe waxa ay noqotay degmo, kadibna mahaala madax Gobal, kadibna caasimad ku meel gaar ah ee dalka.
FG: Sawirada 1-3 waa duke ,iyo qabrigiisii, sawirada 4-10 waa biya xireenkii uu dhisay. Sawirada 11-19 waa warshadii. sawirada 20-23 waa tareenkii. Sawirka 24 waa xaruntii hore ee saadaasha hawada ee ka soo horjeeday saldhiga police-ka magaalada. sawirka 25 waa Masjidkii uu dhisay, sawirka 26 waa Isbitaalkii uu dhisay. Sawirka 27 waa xarun madadaalo, sawirka 28 -36 waa Jowharta cusub. Sawirka 27-29 waa dhirtii uu dibadda ka keenay.